Hanokatra magazay ara-batana voalohany ny Realme amin'ity taona ity any India | Androidsis
Hanokatra magazay ara-batana voalohany ny Realme amin'ity taona ity
Realme niditra tao amin'ny tsenan'ny smartphone Indiana tamin'ny taon-dasa ho sampan'ny OPPO. Ny telefaoniny izay an'ny sokajy antonony dia natomboka ihany koa any Indonezia sy Vietnam. Ity taona ity, mikasa ny hitombo bebe kokoa ny orinasa ary anisan'ny tetikasany ny manokatra fivarotana ara-batana.
Ny CEO CEO Madhav Sheth dia nanambara izany mikasa ny 'hanokatra fivarotana manokana any India izay ahitan'ny mpividy ho traikefa an-tanana ny portfolio-n'ny Realme iray manontolo izay misy kojakoja sy finday avo lenta. Ireo fivarotana ireo dia hanomboka hipoitra manerana an'i India amin'ny tapany faharoa amin'ny taona, araka ny vinavina.
Amin'izao fotoana izao, Ny smartphone finday marika Realme dia azo vidiana ivelan'ny seranana amin'ny fivarotana mpiara-miasa. Ireo mpiantsena liana tamin'ny voalohany izay tsy te-hividy an-tserasera dia afaka nampiditra azy ireo tao amin'ny fivarotana Reliance fotsiny, fa ankehitriny kosa dia miara-miasa amin'ireo mpivarotra ambongadiny marobe misy any amin'ny tanàna maro any India izy ireo.
Realme koa dia nanambara ny drafitra hataon'izy ireo hampitomboina avo roa heny ny famokarana amin'ny fanokafana orinasa vaovao any Greater Nodia. Efa manana iray ianao ao, fa mikasa ny hampiakatra ny famokarany amin'izao fotoana izao ho an'ny finday 60 ka hatramin'ny 80 tapitrisa isan-taona. Ny mpanamboatra koa dia hanambara modely vaovao amin'ity taona ity, araka ny antenaina.
Tamin'ny telovolana fahefatra 2018, Counterpoint Research dia nilaza fa nanana ny anjarany 8% ny orinasa. Ilay mpanamboatra izay nanomboka ho marika kely an'ny OPPO dia orinasa mahaleo tena ankehitriny, araka ny nitaterantsika azy tamin'ny fotoana nametrahan'ny filoha lefitry ny OPPO ny asany ho lasa CEO an'ny Realme ary hifantohany kokoa. Mety eo am-piandohan'ny fanitarana ny marika manerantany isika, ary manamarika izany izahay noho ny paikadim-barotra izay notanterahiny tamin'ny tsena samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Hanokatra magazay ara-batana voalohany ny Realme amin'ity taona ity
Sintomy ny rindrina vaovao an'ny Samsung Galaxy S10 manaraka
Thailand dia mizaha ny haitao 5G an'i Huawei na eo aza ny ahiahy